dhilladii weynayd ee Harald Gustafsson | Apg29
Waa kiniisadda dhacay, kaasoo lagu soo saaro sawirka - Masiixiyada beenta.
Labada cutub oo dhan Nagi Revelation in ay sharaxaad ka mid ah dhillada weyn. Sidaa fahamsanahay in ay jirto arrin muhiim ah, taas oo loo daaweeyaa cutubyada kuwaas.
Harald Gustafsson ahaa magaca qoyska ah, waxaana uu ahaa wadaad Pentecostal ah ee Simurna Church ee Göteborg 1945 - 1967. Waxa uu ku qoran buug Messages xaq ka soo dajiyay. Mid ka mid ah cutubka buugga ee, xaq Whore Great The.
weyn ayaa dhillo Up. 17 iyo 18
Nidaamka shakhsi in aan la kulmi Muujintii, oolna ah muddo dheer. Sidaas darteed waa la bahalka - xoogga gobolka jaahilka, oo sidaas awgeed waa la aroosadda - Kaniisadda - iyo sidoo kale la dhilladii weynayd. Waxaad leedahay si ay u arkaan in ay macno taariikhiga ah. aragtida The taariikhiga ah waa lagama maarmaan, haddii aynu nahay in ay fahmaan images qalaad Revelation ee. Labada cutub oo dhan Nagi Revelation in ay sharaxaad ka mid ah dhillada weyn. Sidaa fahamsanahay in ay jirto arrin muhiim ah, taas oo loo daaweeyaa cutubyada kuwaas.
Yaa ka dhilladii weynayd?
Waa kiniisadda dhacay, kaasoo lagu soo saaro sawirka - Masiixiyada beenta. image Tan waxaa inta badan loo isticmaalaa in Kitaabka Quduuska ah, ka dibna wuu sinaystaa ka gees ah Ilaah la muujiyey doonaa. Old Testament Israa'iil ee xadgudubkii in Ilaah loogu yeedhay skökoväsen nebiyada. Oo markii New Testament Church waa xadgudubteen Rabbiga u, waxa uu noqonayaa mid dhillo indhihiisa.
Moderskökan ma noqon karo qof kasta oo kale oo aan ahayn Papacy Roman Catholic. kaniisadda Tani waa hooyadii skökokyrkor kale ee ku saabsan dhulka.
dhillada weyn iyo aroosadda Assembly soo horjeeda midba midka kale ee kaamil ah. An Ingiriisi qoraa ayaa macneeyeen tilmaamay farqiga u. Mid ka mid ah wakiil ka khayroon daahirnimo laftiisa; kale waa sidaas nijaas, in waxa qudhmay oo moral iyada ka dhigi kara. Mid ka mid ah waa ubad Wanka, kale waxa uu la xidhiidhaa boqorrada kuwa sharka leh dhulka. Mid ka mid ah waxaa xiran a khamiisyada cadcad cajiib ah xaqnimada; gambanaya labaad ammaanta uu dumo guduud, iyo casaan, iyo dahab. Mid ka mid ah bikrad daahir noqdaan a, kale waa hooyada u ah dhillooyinka ee dhulka. Mid ka mid ah waa la neceb yahay iyo silcin jiray; kale waa sakhraantay dhiiggii quduusiinta. aroosadda, waxaan lumin arkaan quruxda ammaanta samada; dhillo baaba'aan gudcurka iyo qiiqa dabka guriga in iyada baabbi'in doona.
Waxa uu noqday kiniisadda dhillo Roman Catholic ahaa mar apostlatidens shirka aroosyada. Laakiin qashinka galay oo baabbi'iyey nolosha ruuxa koxda. Priestcraft danbeyn yimid, halkii adeegga ruuxiga ah iyo weliba hadiyadaha Ruuxa. Oo markii Constantine Emperor ka qaaday kaniisadda Catholic jir ka yar bacdi dowladda Roman, waxaa horey u ahaa nolaleed ee Papacy.
Dhillo lahaa iyada gacanta koob dahab ah karaahiyada ahaa ka buuxaan nijaasta ahaa oo sinadeeda. Karaahiyada ah inta badan waa magaca sanam Kitaabka. Iyo sanam caabudidda u le'daan Roman waa sidaas dhammaataan jaahilka, maadaama ay ka heli karaan. Ma aha oo kaliya ka buuxaan, waa cayda ka gees ah Ilaah. Pope sheeganaya meel Ilaah. Waxa uu ku andacoodey in uu noqdo wakiilka Masiixa dhulka. Leo X - Pope kuwaas oo ahaa a casriga ah ee Martin Luther - heshay qadarin rabaani ah. Golaha Lateran aamaanay isaga ugu erayadan: "aadka aad haybad ilaahi ah waxaan ku ammaaneen. Waxaad tahay ninkeeda kaniisadda ee, Prince oo ka mid ah Rasuullada, sayidkaygiiyow caalamka iyo boqorka. Waxaad tahay adhijir iyo dhakhtarkaaga. Waxaad tahay Ilaah. "
baadari kale, Pius IX, ayaa sheegay in isaga qudhiisa of: "Anigu waxaan ahay jidka, runta iyo nolosha"
Waxay ka buuxaan, oo waa hadiyad kaniisadda this sida Maria nidaam oo u sujuuddaan quduusiinta, waxba ma aha, laakiin mångguderiet jaahilka jir ah, kaas oo kiniisadda laga dhaxlaa dunida jaahilka ka dibna siiyey galyadeena yar Christian. Papacy gudahood Mary ayaa khiyaaneeyey labada Ilaaha Aabbaha ah iyo Ciise Masiix. Mary waa dhexdhexaadiyaha. Haa, iyadu waa Ilaah.
cibaadada Pope Church iyo saas faleynin quduusiinta xad-dhaaf ah waa sidaas oo caan ah, waa loo baahnayn in la hadlo waxa ku saabsan. Skökokyrkans koob dahab ah karaahiyada ahaa ka buuxaan.
lime ayaa sidoo kale ku jira sinadeeda nijaasta ah. Waxa looga golleeyahay si fiican marka hore of iyada gaalnimo odaygii qaybta iyada iyo siidaynta dunida ee weyn iyo amiirradooda. Her qabka sinada ruuxiga ah.
Laakiin Papacy ayaa sidoo kale ka jira yaamayska ah suuska moral. Wadaaddadii Catholic ayaa inta badan la sinaysta aad. Celibacy ayaa ay habaar waaweyn.
Marka seminaries Roman Catholic, buugaagta ka mid ah fiqiga akhlaaqda of jesuitteolog a Alphonsus Maria de Liguori. buugaagta Tani waxay u bixinaysaa waxbarida faahfaahsan ee cayn kasta oo Xumaan iyo sinada iyo galmada qasnaan.
Qoraaga Norwegian Marta Steinsvik daabacay buug wuxuu ahaa soddon sano ka hor la horyaalka ee Saint Peters Himmelnökler. Waxaa, iyadu daaha ka sino Cad le'daan jid wuxuu wadaaddadii Catholic gabi ahaanba ka careysan. Buugga waxaa qaybta ugu kaliya xigasho ka inta badan Liguoris fiqiga moral laakiin sidoo kale ka buugaag qorayaasha kale Catholic '. xigasho Kuwani waxaa loo tixgeliyaa inay by faaf sida fisqi, in qeybo badan oo qorniinkii waxaa loo daboolay khad.
Marka musharixiinta wadaadka Catholic helo aqoon ku saabsan Xumaan iyo qasnaan galmada, sida buugga this si fiican baro, haddana waxaa loo tixgeliyaa in ay diyaar u adeegidda loo confessionals Catholic noqon.
Imisa kun oo haween ah kuwaas oo la qalday by wadaaddadii confessionals ah, malaha waa wax ka badan Ilaah tirin on. confessionalism The Catholic ayaa waxa ay il of habaar waaweyn ee ixtiraamka moral badan laga yaabee kale oo kasta. Kuwa shakiya saxnaanta statements aan ka akhrisan kartaa buugga la iibiyay by Marta Steinsvik ama ballansan wadaadku, naagta iyo qirashada Charles Chiniquy, kii konton sannadood iska lahaa kaniisadda Catholic iyo wadaad waxaa jiray.
dhilladii weynayd iyo bahalkii
Bahalka, sida aynu tilmaamay hore, gobolka jaahilka ah. In bahal this casaan fadhiistay dhillo. Waxaa loola jeedaa, marka hore, in xukuumaddu ay taageertaa kiniisadda dhillo. Wuxuu bilaabay markii Constantine sarraysiin Church Christian ah, diinta gobolka, oo waxay u yimaadeen in ka yar hoyga ee gobolka iyo ilaalinta. Waxa uu ahaa shil ugu weyn ee kiniisadda ee. Waynayn dhamaaday cadaadis ku daatay Dowladda, laakiin kiniisadda sidoo kale noqday ku tiirsan gobolka. Tani booska nasiib darro ah la wadaago oo dhan dowladda taageerto oo ilaa xad gobolka sameeyay kiniisadaha Christian of Old Catholic ah. Later, Papacy ayaa kor gobolka. Ururku wuxuu la state waxay ahayd mid ka mid ah tallaabooyinka skökoväg khatar ah kiniisadda ee.
Laakiin dhilladii on bahalka fadhiya sidoo kale ka dhigan tahay in ay doonayeen inay qaataan kelyaha iyo hoggaami gacmahooda iyo xakameeyo awoodda dawladda ee isaga ka farxiya. In horumarka Roman Catholic Church ee, aan arrintan u aragno aad u cad. Papacy qaaday arrin ugu dhakhsaha badan gacanta hindisaha siyaasadeed. Wixii qarniyo, tan iyo amiirradii iyo boqorada u tartamay inuu ku guuleysto baadari iyo nimcada le'daan iyo raallinimo. Oo iyagu inta badan ahaa qalab diyaar kaniisad si ay u qabtaan amarrada iyada. Her awoodda uu leeyahay waqtiyo si weyn in boqorada iyo boqorro labada ayaa laga ganaaxay garoomada, haddii ay diideen in ay iyada adeeca. Dhawr ka mid ah boqorada Dr Makumbe loo caleemo saaray by Pope ka. Papacy helay jidka weyn saameyn kasta oo siyaasadeed. saamaynta siyaasadeed ee kaniisadda ayaa weli ma dhamaaday. Waxaa laga yaabaa in ay awood u noqon doonaa xataa ka weyn dhamaadka waqtiga, wejiga xukunka Ilaah hortiisa.
Maalin maalmaha ka mid, si kastaba ha ahaatee, bahalka inay ku tuuraan fuushanba waayya qudhiisa. Markaas iyada öclestimma garaacay.
dhilladii weynayd oo quduus ah.
Waxaan doonayaa in ay xoogga saaraan in marka aynu ka hadalno of Church Catholic Roman ah, waa nidaamka aynu u jeednaa, ma shakhsiyaadka. Waxaa jiray oo weli waxaa dadka Ilaah ka Cabsada ee kaniisadda this, iyo sidoo kale in kaniisadda Pentecostal ah waxaa laga yaabaa in dadka ku dhacay skökoliv ruuxiga ah. Sidaas darteed waa habka aan ka hadleynay. "Oo haddana waxaan arkay naagtii oo ku sakhraantay dhiiggii quduusiinta." Papacy ayaa daadiyaan Shuhadada dhiig badan oo dhan calool adag Roman Emperor wada. Waxaa lagu qiyaasaa in ugu yaraan konton milyan oo Shuhadada dilay kaniisad this. Iyo cadaawadda le'daan oo xidhiidh la leh quduusiinta badan shahiidnimo ku dhaadhacay oo ay ka mid yihiin xasuuqii Emperor Nero ee hooska.
Inkvisationen qarniyadii dhexe oo sita alaabtii jirdil ay ahayd mid ka mid ah falato ugu soo hindiseen dad kale cadaab. Iyagu ma ay ahaayeen content si sahal ah ay ku dhinteen dhibanayaasha ay. Ka hor geerida yimid sida liberator ah, lahaa qaar badan oo muqadas ah, kuwaas oo mari jirdilka direst. Xaalkaas godka ahaa ka baxsan description u xun. Gaar ahaan inkvisationen Spain ayaa sumcad ku daatay. Inkvisationsdomstolarnas xubnaha by Pope soo magacaabay.
Church Catholic Roman xiga ee maanta ma aragti diiday ama si rasmi ah baabiiyo aarguda ah. nyorganiserades Inkvisitionskongregationen 1908 oo waa weli ugu horeysay mid ah oo waxan oo dhan jameeco kaniisadda. Pope qudhiisu waa horjooguhu machadkan. Tani ayaa sheegay in wax badan oo ku saabsan hab dhaqanka kaniisadda ee xagga kuwii ay soo wici kufaar ah.
Inkastoo Church Orthodox ee Russia, silcin jiray in uu waqti Masiixiyiinta ah sida in ay Iimaan ka caqiidooyinka kaniisadda ee is khilaafeen. Dad badan ayaa codkoodii iyo deyr ku saabsan in ka badan jidka arxan taas oo bolsehevikerna oo xidhiidh la leh Revolution Ruush ah liquidated Church Orthodox ah. Laakiin sababta aan sidoo kale la hadal oo ku saabsan ku xanuunsaday waa calool adag in rumaystayaasha kale ayaa bandhigi dhankeeda kaniisadda ee iyo wadaadada. Dadkii badnaa oo quduusiin ah ayaa qallashaa xabsiyada Ruushka oo sakhiray in ay dhibaato ka baxsan, taas aawadeed dabeecad Church Mu'miniinta kale. Xiriirka A yaab leh oo laga dheehan karo, markaas kiniisadda oo axdi kula gobolka galay. Sidaas daraaddeed kuwaas oo gobolka in silciyo Masiixiyiinta ah. Kaniisadda la wareegay markii hawshan lagu hoobtay. Oo ilaa xad in mas'uuliyiinta dadweynaha ayaa toogasho cadaadis sida ka dib, waxa uu ahaa qalab kiniisadda ee. Mid ka mid ah qoraaga ayaa yiri: "Mar labaad iyo mar, waxa uu ku guulaystay in uu dilka this, warqad dhisay galku awoodo, qalabka víirldsordningens rabaani ah, qalab docile ee ay ka oon baxaanna waayo, dhiiggu iyo Cadho cadaadis ah. Meel kasta oo diinta förvärldsligad skökovíisen a waafaqsan awoodaha dunida, meel kasta oo la bewitching awood seduction qalabaysan naag fuulitaanka xoolaha casaan xoog dunida (Rev. 17), halkaas oo aanu ugu dhakhsaha badan xabsiyada furo arko, kacdo jirridda iyo dembiyadii xukunka Christian been ah cabsiyaha ilaa xagga samada.
dhillo waxaa cabbay dhiiggii quduusiinta.
weyn ay Dhilladii
Xukunkan inta badan waa la xoojin doonaa by bahalka la mid ah, iyada hore loo kaxaystay. In Russia, waannu soo aragnay sida ay dowladda communist cas ayaa waxay dhaceen Church Orthodox iyo ku dhowaad gebi ahaanba iyada la jajabiyey. Kaasu wuxuu soo noqnoqda dhowr sano ka dib in Mexico. Iyada oo tusaale si aad u hesho fikrad ah sida ay u tegi doonaa marka vilcldjuret ay la socdaan boqorrada dhulka doonaa "neceb dhillada, oo iyada way bi'in oo qaawan, oo hilibkeedana way cuni doonaan, oo ku gubi doonaan dab ka dhigi doonaa" (Muujintii 17: 16 b).
Maalin maalmaha ka mid gobolka gariirin doonaa off saamayn kiniisadda oo dhan, iyo halkii ay iyada kor u qaado, waxa iyada baabi'in doonaa.
Waxaa weli waa xukunka aad Ilaah, oo saameeya habdhiska, taas oo Jees Kiniisadda Ciise Masiix oo ah shuqulkiisa dhulka. Iyo xukunka Ilaah ee ku saabsan sida dhillo oo kale aan xusno doonaa samada rayrayn.
"Farxa badan waxa dhacay, iyada oo si, aad samada, iyo quduusiintay, iyo rasuulladow, iyo nebiyadow, waayo, Ilaah wuxuu iyaga ku hayay iyada on, oo idinka aargudan ah" (Muujintii 18: 20).
In cutubka sameeyey Revelation siddeed dhillo oo Baabuloon Great sida fikradaha isku. Tani ayaa yaabay qaar ka mid ah. Waxaan u malaynayaa waa saamiga la mid ah sida marka aroosadda oo Yeruusaalem New diyaar u yahay sida wax la mid ah. Taasi hab wanaagsan Yeruusaalem New yahay guriga weligeed ah aroosadda ee, halka dhilladii deggan Baabuloon Weyn. Waxaa ay ku fadhiisataaba sida boqorad ah, iyo ruuxa Babel ayay hantiyeen. Markaas, marka Baabuloon weyn hoos u dhaco, sidoo kale waa dhillowday, in xukunka xaqa ah oo Ilaah.
Iyada oo asaanay ku-xumida dhillada weyn, a dhawaaqa calaamad digniin samada ka.
"Oo haddana waxaan maqlay cod kale oo samada ka tidhaahdaan:
Iyada ka soo baxa, dadkayga oo ah, inaad dembiyadeeda la qaybsane, iyo inaydnaan belaayooyinkeeda heline. " (Rev. 18: 4).
Ka soo bax skökoväsen Ruuxa oo dhan!
Waxaan Dhab ahaan aad ugu dhow in markii ugu markii xukunka kaniisad dhillo waa in la dhaqan. Sida aynu sidoo kale ogahay, in markii ugu socdo waayo, arooskii Wanku. waxaan laga yaabaa in aamin to our arooska jannada unswervingly, sidaas darteed waxaan ka farxisay inuu ka hor tago, goortuu ku yimaado!
Waxa uu dhawaan waxaa soo socda! U diyaar!